Escobar Fold 2? နာမည်လေးက အဆန်း၊ ဖုန်းကို မသိပေမယ့် Pablo Escobar လို့ ပြောရင် မသိတဲ့လူရှိမယ်လို့ မထင်။ ကိုလမ်ဘီယာ Robin Hood လို့ နာမည်တွင်သလို ကိုကိန်း၊ ဘိန်းမှောင်ခို လုပ်ရင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့ ရာဇဝတ်သား တနည်းပြောရရင် အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေ အလိုရှိနေတဲ့ ဘိန်းဧကရာဇ် ဆိုရင်လည်း မမှားပေဘူး။
သူ့အကြောင်းပြောနေလို့ နည်းပညာလောကနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ? တည့်ပြောရင်တော့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် Escobar Inc ဆိုပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာမှ တဖွဖွ ပြောနေကြပြီ။ နာမည်ကျော် Tech Reviewer ဖြစ်တဲ့ MKBHD က ဗီဒီယိုလုပ်ပြီး Scam ဖြစ်တာကို သက်သေထူထားပါတယ်။
ဒီတော့ စာဖတ်သူတွေ သိသွားရအောင် ဇာတ်လမ်းဆင် ရေးရရင် Fold 1 ၊ Fold2ဆိုပြီး ကိုယ်တွေ လုံးဝမမျှော်လင့်ဖူးတဲ့ စျေးနဲ့ ရောင်းချနေပါတယ်။ Worldwide Free Shipping လုပ်မယ့်အပြင် Marketing အတွက် သုံးထားတဲ့ Promo Video ကလည်း Sexy Model နဲ့ လုံးဝအလန်း ဖြစ်နေတယ်။
ခုနေ နောက်ဆုံးထွက် Galaxy Z Flip ဝယ်မယ်ဆိုရင် ၂၂ သိန်း အနည်းဆုံး ပေးရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် Fold 1 ၊ Fold2သုံးမယ်ဆိုရင် ၆ သိန်းခွဲလောက်နဲ့ Samsung Galaxy ဖုန်း Quality မျိုးရမယ်ဆိုရင် ဘာရွေးမှာလဲ?
အဲ့တော့ စာဖတ်သူတွေ မဆိုထားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Reviewer တွေဆို ပိုဆိုးပြီ။ သိလိုစိတ် မတရား ပြင်းပြနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘိန်းဘုရင်ဖုန်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ မဟုတ်ဘဲနဲ့ Foldable Phone ရောင်းနေတာဆိုတော့ နည်းနည်းနောနော အဆင့်တော့ မဟုတ်။
တဖက်မှာလည်း ဘိန်းရာဇာ Legacy ရှင်သန်နေဆဲဆိုတော့ ရှိန်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် MKBHD ထုတ်ပြသွားတဲ့အတိုင်း Fold 1 နဲ့ Fold2ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ခေါက်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Royale Flexpai နဲ့ Galaxy Fold ဖုန်းသွားဖြစ်နေပါတယ်။ ခုနေ မူပိုင်ခွင့် တင်ပြီးသား ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ပုံတူထုတ်ရင် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ?
Galaxy Fold (Image: Tech Radar)
အဲ့ဒါကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ဘိန်းရာဇာ Pablo Escobar Wallpaper သုံးထားပြီး Samsung Logo ပါနေတဲ့ နေရာတွေကို ကိုယ်ပိုင် ရွှေရောင် စတေကာ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်ပိုးပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Recyclable လုပ်နိုင်တဲ့ Product ဘာညာ EU အသိမှတ်ပြုတဲ့ Logo အတုတွေပါ ထည့်ထားပြီး Fold 1 ၊ Fold2လို့ မိုက်မိုက်ကမ်းကမ်း လိမ်ရောင်းလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အပေါစား ဆန်မှန်းသိသာတဲ့ Skin ခွာလိုက်တဲ့အခါ ဖုန်းမော်ဒယ်တွေက Royale Flexpai နဲ့ Galaxy Fold သွားဖြစ်နေတယ်။ ပြောချင်တာက Fail DEMO အလုံးတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Samsung Fix လုပ်ထားတဲ့ Rebranded မော်ဒယ် ပါမပါ တပ်အပ် မပြောနိုင်သလို Reviewer တွေ လက်ထဲမှာ စိစိညက်ညက် ကြေသွားတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Pioneer အလုံးတွေ သွားဖြစ်နိုင်တာပဲလေး (ဂျင်းထည့်ချက် မြင်မကောင်းဘူး)
အဲ့တော့ Fail အလုံးတွေ လိမ်ရောင်းတာလို့ ပြောနိုင်သလို အယုံကြည်ရှိအောင် Rip Samsung လို့ နာမည်တပ်ပြီး Galaxy Fold တွေကို ထိုင်ရိုက်ခွဲပြနေတဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေးပါ တင်ထားရော။ တဖက်က ဘိန်းရာဇာ နာမည်ပါနေတော့ ဘာမကျေနပ်စရာ ရှိထားလဲ တွေးစရာပေါ့။
အဲ့လောက်ထိ ကြမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေ သိချင်တယ်ဆိုရင် ripsamsung.com မှာ သွားကြည့်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် လစ်သွားပြီ ထင်ပါတယ်။ ripsamsung.com Domain ကို Redirect လုပ်ထားတဲ့ Link လည်း သေနေသလို Escobar Inc ထဲ ဝင်ကြည့်လို့ မရပါတော့ဘူး။
အဲ့မှာ MKBHD ပြထားတာက Founder နဲ့ CEO ၂ ယောက်ရဲ့ Profile တွေပါ။ Roberto De Jesus Escobar ဆိုသူက တည်ထောင်သူ ဖြစ်ပြီး ရေးထားတဲ့ Chief of Assassination of the Medellin Cartel စာသားက စဥ်းစားစရာ။
Medellin Cartel ကို ၁၉၇၆ မှာ Pablo Escobar တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကိုကိန်းနဲ့ ဘိန်းမှောင်ခိုကူးဖို့ ဖန်တီးခဲ့တာလို့လည်း ပြောနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ကောင်က အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် CEO ဆိုသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Twitter အောာက်မှာ Investor လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တကယ်တမ်းကျ Promote လုပ်တဲ့ Fake Account သာ ဖြစ်ပြီး Boring ကုမ္ပဏီရဲ့ Flamethrower ကိုလည်း အတုလုပ်ရောင်းနေတာကိုလည်း တင်ထားပါတယ် (သူ့ဟာတော့ မဖြစ်နိုင်) Escobar Inc YouTube Channel မှာလည်း ၁ မိနစ်စာ ဗီဒီယို ၁၅ ခုလောက် တင်ထားပေမယ့် Promo ၊ Marketing အတွက် လုပ်ထားတဲ့ Scam တွေ ဖြစ်နေပြန်တယ်။
Escobar Inc Official YouTube Channel
ယုံစားလွယ်အောင် Galaxy Fold ကို မီးထလောင်တဲ့အထိ ရိုက်ခွဲပြတဲ့ Footage ကလည်း တစ်စုံတယောက်သောသူက သက်သက် Bash တယ်။ အဲ့ဒါကို ripsamsung.com Website လုပ်ပြီး တမင်လုပ်ပြသွားဖူးတယ်လို့ MKBHD ဆိုပါတယ်။
အခု Fold2ရောင်းမယ်ဆိုမှသာ အဲ့ Domain ကို Escobar ကောင်က ပြန်ဝယ်ပြီး သူ့ Page ကို Redirect လုပ်တယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
You may not receive as well
ပြောရင်တော့ဗျာ .. လူတွေကို အရူးလုပ်တယ်ဆိုရမယ်ပေါ့။ နည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဘာမှမသိတဲ့လူမပြောနဲ့ Tech Reviewer တွေကိုတောင် အချဥ်ဖမ်းထားတဲ့ အကွက်ကြီး။
Image: Gadgets NDTV
GizChina မှာ ကုမ္ပဏီက Order မှာတဲ့ ပိုက်ဆံကိုကျယူတယ်၊ ပစ္စည်းတော့ရောက်မလာဘူးလို့ ခုခေတ် လိမ်စားနေတဲ့ လုပ်ကွက်ပုံစံ ပြောထားပါတယ်။
MKBHD ကိုတောင် သာမန်မဟုတ်တဲ့ Mail တွေ လိမ့်ပို့ပြီး Update လုပ်နေရလို့ ကြာသွားတယ်ဆိုပြီး အရင်ဆုံး Request လုပ်တယ်။ ပထမတစ်လုံးမှာတုန်းက မူရင်းနာမည် သုံးခဲ့မိတဲ့အတွက် နာမည်ကျော် YouTuber မှန်းသိသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Tech လောကမှာ Review အလုံးဆိုရင် ကိစ္စပြီးတာနဲ့ ပြန်ပေးရတယ်။ Client နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဘယ်ချိန်မှာ ပစ္စည်းရမယ်၊ ဘာအတွက် လုပ်ပေးပါလို့ Request ပြီးသွားရင် ပိုက်ဆံကိစ္စ ပြောတယ်။ ဟိုကောင်က အဲ့လိုမပြောဘဲ CEO က ဗီဒီယို လုပ်စေချင်တယ် ဘာညာလုပ်တော့ Genuinely Interested လို့တောင် အံ့အားသင့်တာလား၊ ကြောင်သွားတာလားဖြစ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ MKBHD အမူရာ အဲ့လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တော့ ဇာတ်လမ်းဆင်တာ ကောင်းပေမယ့် အကွက်မစေ့တော့ Fail ထားတဲ့ DEMO အလုံးတွေကို သက်သာတဲ့စျေးနဲ့ ဂျင်းစိမ်း၊ ငြုပ်သီးစိမ်းထည့်ရောင်းတဲ့ ပုံစံချိုးထားတော့ မဝယ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Image: Mobile Syrup
ဒါပေမယ့် Galaxy Fold ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁,၉၈၀ စျေးရှိတယ်၊ အနိမ့်ဆုံး စျေးနဲ့ရောင်းချနေတဲ့ Galaxy Z Flip ကို ဒေါ်လာ ၁,၂၉၉ သိန်း ၂၀ ကျော်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ပါလို့ အဆုံးသတ်မှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တော့ စာဖတ်သူတွေလည်း ဇာတ်ရည်လည်သွားပြီ။ Escobar နဲ့ပုံမှားရိုက်ပြီး Sexy Model တွေနဲ့ Marketing လုပ်ချက်က ကြွေစရာ။ Fail DEMO အလုံးကို Troll ထားတဲ့ Tech Domain တွေလိုက်ဝယ်ပြီး Bash တာကလည်း တကယ်စဥ်းစရာ
Image from Unbox Therapy YouTube Channel
စိတ်ဝင်အစားဆုံးက Escobar Inc ကို Run နေတဲ့ကောင် ဘယ်သူဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ တကယ့် မူးယစ်ရာဇဝတ်သားလည်း ဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေး ဒါမယ့် Who Cares?
Credit: Marques Brownlee YouTube Channel
Related Source: Escobar Inc Official YouTube Channel & Homepage ၊ Unbox Therapy YouTube Channel ၊ ၊ Gadgets NDTV ၊ Android Authority ၊ GizChina ၊ Mobile Syrup
Realme C3 Review: တကယ်ပဲ Budget Gaming ဖုန်းလား?